दुखको खबर !! दु’र्घटनामा श्रीमान’को मृ’त्यु’को खबर पाएपछि पत्नीद्वारा आ’त्मह’त्या – ABC NEWS 24
दुखको खबर !! दु’र्घटनामा श्रीमान’को मृ’त्यु’को खबर पाएपछि पत्नीद्वारा आ’त्मह’त्या
साईप्रसको लार्नाका सहरमा २३ वर्षीया नेपाली युवतीले आइतबार राति अ त्म ह’त्या गरेकी छन् । दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. ८ खरे घर भइ हाल साईप्रसमा घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत शुक्री तामाङले आ’त्म ह त्या गरेको प्रहरीलाई उधृत गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ साईप्रसले जनाएको छ ।
मृ’त’क तामाङ सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा नेपालको काठमाडौँ ईन्टरनेशनल मेनपावरबाट साईप्रसको लार्नाका सहरमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न आएकी होनरी कन्सुलेट साईप्रसका प्रमुख डा. रामजीवन पञ्जियरले जानकारी दिएका छन । मृ त क तमाङको श व उनकै परिवारको सल्लाह अनुसार स्वदेश पठाउने डा. पन्जियरले बताए ।
मृ’त क तामाङ वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको एक वर्ष नपुग्दै साइईप्रसमा आएकी थिइन् । श्रीमान् सुबिन तामाङ नेपालमा ड्राइभरको पेशामा थिए । आइतबार दु र्घटना’मा श्रीमान्को मृ’त्यु भएको खबर पाएपछि सोही रात’मा आ त्म’ह ‘त्या गरेको बताइए’को छ ।
मृ’त’क तामाङले टिकटकमा श्रीमान्को दु’र्घट’ना’को भिडियो पोष्ट गर्दै आफ्ना आमा, बुबा, सासू र ससुरासँग माफी माग्दै आफू पनि आफ्नो ‘मुटु’ सँगै जान लागेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
← दुई सन्तानकी आमाले श्रीमान विदेशमा भएको बेला छोराछोरीलाई अलपत्रै पारेर अनैतिक सम्बन्ध भएको केटासंग भागेपछि……………..(भिडियोसहित)
१२ वर्षको प्रयासपछि विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार →